HomeWararka CiyaarahaLiverpool oo isku diyaarinaysa in ay Juventus kula tartanto Ryan Gravenberch
November 26, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Suuqa kala iibsiga 0
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaar u tahay in ay Juventus kula dagaalanto adeega xiddiga khadka dhexe uga ciyaara kooxda Ajax ee Ryan Gravenberch inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga dambe.
19 jirkan ayaa qaab ciyaareed cajiib ah ku soo bandhigay kooxdiisa Holland intii lagu jiray xilli ciyaareedkii 2021-22 isaga oo dhaliyay hal gool sidoo kale caawiye ka noqday 19 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
Ajax ayaa isku dayaysa inay heshiis cusub ka saxiixdo xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands, iyadoo qandaraaskiisa uu ku eg yahay June 2023, laakiin hadda waxaa jira warar badan oo la isla dhexmarayo oo ku saabsan mustaqbalkiisa.
Sida laga soo xigtay Calciomercato , Juventus ayaa ka go’an inay la soo wareegto ciyaaryahanka khadka dhexe sanadka soo socda, laakiin Liverpool ayaa diyaar u ah inay kula tartanto kooxda reer Talyaani saxiixiisa.
Manchester United ayaa sidoo kale horay loogu tirinayay inay xiiseyneyso xiddiga reer Holland, kaasoo aan hal daqiiqo ka maqnaan xilli ciyaareedkii 2021-22 ee Champions League ee heerka group-yada.
Gravenberch ayaa dhaliyay 10 gool waxana loo diwangeliyay 8 caawin 80 kulan oo uu u saftay Ajax tartamada oo dhan tan ilaa markii uu saftay kulankiisii ​​ugu horeeyay 2018